Sawirro: Ismiidaamiyihii isku qarxin rabay Guriceel oo xukun adag lagu riday | Xaysimo
Home War Sawirro: Ismiidaamiyihii isku qarxin rabay Guriceel oo xukun adag lagu riday
Sawirro: Ismiidaamiyihii isku qarxin rabay Guriceel oo xukun adag lagu riday
Maxkamada darajada koowaad ciidamada qalabka sida Soomaaliya ayaa maanta xukun adag ku riday labo eedeysane oo uu ku jiro ismiidaamiyihii isku qarxin rabay 23-kii May ee sanadkan xaflad ay ku sugnaayeen madax ka tirsan Ahlu Sunna oo ka dhaceysay degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud.
Eedeysanaha koowaad Maxamuud Cabdi Cabdiraxmaan oo ah ninkii fulin rabay qaraxa ismiidaaminta ayaa lagu xukumay xasbi daa’in, sida uu go’aanka ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda ciidamada, Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur (Shuute).
Sidoo kale Cali Dhubad Nuure Siyaad oo lagu eedeeyey inuu la shaqeynayey ninkaasi, islamarkaana ay ka wada tirsanaayeen Al-Shabaab ayaa isna lagu xukumay xabsi daa’in.
Guddoomiye Shuute ayaa sheegay in labada eedeysane lagu helay dambigii lagu soo oogay, islamarkaana ay qirteen, basle wuxuu tilmaamay inay heystaan fursad kale oo ay ku qaadan karaan racfaan, hadii aysan ku qanacin go’aankan maxkamadda ciidamada.
Ismiidaamiyaha la fashilyey ee Maxamuud Cabdi Cabdiraxmaan ayaa xilliga la qabanayey xirnaa jaakadda qaraxyada, waxaana isku duubay askari ka tirsan ciidamada ururka Ahlu Sunna Waljamaaca, kaas oo suura-galiyey in la fashiliyo qaraxa, lana qabto ninkaasi.
Israa’iil oo duqeysay guriga hoggaamiyaha Xamaas
Ra’isal wasaaraha israa’iil oo wacad ku maray in la sii wadi...
Gantaallo laga soo riday Suuriyaa oo Israel ku soo dhacay
Dowladda Shiinaha maxay u eryaneysaa Imaamyada masaajidyada?
Ciidamo ka tirsan Booliska Soomaaliya oo tababar ka soo laabtay
Siduu ku billowday dagaalka Qasa ee cirka isku sii shareerayaa?
Al-Shabaab oo ku baaqay in Soomaaliya loo soo jihaad doonto
Awoodda iyo hubka Xamaas ay heysato
“Wax aan cunno ma helin tan iyo markii uu soo baxay...
M Farmaajo oo kulan la qaatay guddoonka Midowga Ardayda Soomaaliyeed ee...
MADAXWEYNE FARMAAJO OO HAMBALYADA CIIDDUL FIDRIGA U DIRAY SHACABKA SOOMAALIYEED
Madaxweyne Farmaajo iyo Marwada Koowaad oo ka qeyb galay caleemo-saarka Madaxweynaha...
Kenya Airways oo ka hadashay duulimaadyada la sheegay inay Hargeysa ku...